A ga-ewepụta Huawei Mate 30 na Septemba 19 | Gam akporosis
Izu ụka ndị a anyị na-emezuko nwere ọtụtụ nkwụsị na Huawei Mate 30, na-esote elu-ọgwụgwụ nke ika China. Ha nwere leaked nkọwa banyere ese foto nke a ekwentị abụọ. Tụkwasị na nke a, a na-atụ anya na ha ga-eji usoro Kirin ọhụrụ rụọ ọrụ n'ime ya, nke a nụrụ na ọ bụ Kirin 985, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịtụ anya ụdị dị iche.
Enwere nkọwa ọhụrụ gbasara Huawei Mate 30 ndị a, nke na-agwa anyị banyere mmalite ya ma ọ bụ ụbọchị ngosi ya. Na mgbakwunye, ha na-enye anyị nkọwa gbasara nhazi nke ha ga-enwe n'ime, nke ga-abụ Kirin 990, ọ dịghị 985 dị ka ekwuru ugbu a n'ịntanetị.
O yiri ka nke a dị elu nke akara ika China A ga-enye ya na Septemba 19 n'ụzọ iwu. Ka ọ dị ugbu a asịrị egosiwo na Huawei Mate 30s a ga-abata n'etiti Septemba na Ọktọba, yabụ ọhụụ ọhụrụ a dabara nke ọma n'ihe anyị na-anụ banyere ekwentị.
N'aka nke ọzọ, enwere ọtụtụ akụkọ gbasara ihe nhazi anyị ga-ahụ na ọkwa dị elu a. Ọ bụ ezie na ọ dị ka nke ahụ akara ndị China na-akụ nzọ ugbu a na Kirin 990. Ihe anyị na-amaghị bụ ma ọ bụrụ na ọ bụ otu ihe ahụ na processor, ma ya na a dị iche iche aha ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọzọ mgbawa. Ebe ọ bụ na nso nso a kwuru na ga-ebido ndị nhazi abụọ dị elu ahịa.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị ka ọ gosipụtara na Huawei Mate 30 a ga-abata na ndakọrịta maka 5G. N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị ọtụtụ nkọwa ka ekpughere banyere ya ruo ugbu a, mana anyị na-aga n'ihu ịhụ ụdị gam akporo na-aga 5G na ekwentị ha dị elu. Na nke a na processor ga-enwe a modem maka ya.
O doro anya na ọ bụrụ eziokwu, n'ime ihe karịrị otu ọnwa, anyị ga-enwe ike izute Huawei Mate 30 a na ọkwa. Ọdịdị ọhụrụ dị elu nke ika China, nke amarala okpueze dịka otu n'ime ndị kachasị ewu ewu na mpaghara ahịa a. Enwere ọtụtụ mmasị na ụdị ndị a, yabụ anyị ga-ege ntị na akụkọ ọhụrụ gbasara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei Mate 30 ga-abata na September na ihe nhazi ọhụrụ